Heshiiska doorashadda oo la saxiixayo iyadoo tabasho jirto | KEYDMEDIA ONLINE
Heshiiska doorashadda oo la saxiixayo iyadoo tabasho jirto
Siyaasiyiin kasoo jeeda gobollada Waqooyi ayaa diiday habka saami-qeybsiga ee la sameeyay, gaar ahaan xubnaha gudiyadda doorashadda.
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxaa la filayaa Maanta in Xaflad ballaaran oo ka dhacay Teendhada Afisyooni lagu saxiixay heshiiska laga gaarey khilaafka doorashadda Soomaaliya.
Madaxda Maamullada iyo Rooble oo uu wehliyo duqa Muqdisho ayaa muddo 4 maalmood ah ku shirayay Afisyooni, iyagoo kulankooda ahaa mid saxaafadda dibadda ka joogto oo aan xogtiisa lala socon, laakiin Afhayeenka xukuumadda ifafaallo wanaagsan dadka la wadaagayay.
Waa hubaal inay dul-duleelyo soo baxayaan marka lasoo bandhigo heshiiska maanta, waxaana durbo billaabay inay kasoo horjeestaan siyaasiyiinta kasoo jeeda Somaliland oo qoraal ay soo saareen ku sheegay inay qaadaceen natiijadda shirka.
Sidoo kale, reer Gedo ayaa diiday in Axmed Madoobe go'aan ka gaaro arrimaha gobolkooda, iyagoo sheegay in aysan aqbali doonin Jubaland inay maamusho doorashadda Xildhibaanada laga soo doorto gobolka.
Xafladda la qabanayo waxaa lagu casuumay Madaxdii hore ee dalka, Mushariixinta Mucaaradka xubno ka socda, Ururada bulshada rayidka iyo marti-sharaf kale oo wakiiladda beesha caalamaka ay kamid yihiin.
Waxaan la ogeyn inuu Farmaajo kasoo qeybgalayo, maadaama uusan hadda wax xasaanad ah lahayn, islamarkaana door ka qaadan heshisika cusub, oo isagu ku fashilmay inuu si aan dood iyo is-jiid-jiid lahayn ku dhameeyo kala aragti-duwanaanta hanaanka doorashadda.